Nezvedu - Jiangsu Excalibur Power Machinery Co., Ltd.
Kudzora Kwemhando Uye Guarantee
Vhura Furemu Dhiziri jenareta
Silent Diesel jenareta
Peturu Water Pump
Reparafini Water Pump
Dhiziri Tsvina Yemvura Pump
Yakakwira Pressure Pump
Pamusoro Kupedza Screed
Yakakwira Yekumanikidza Washer
Simba Tiller & Murimi
Spare Zvikamu & zvishongedzo
Injini Spare Zvikamu
Jenareta Spare Zvikamu
Water Pump Spare Zvikamu
Chiedza Kuvaka Mashini Spare Zvikamu
CERTIFICATE & Rukudzo
GORE ZITA SOURCE
2018 Yepamberi Enterprise yeTechnological Innovation Xinghua Municipal Committee Komiti Yekuvandudza Kwehupfumi
2017 High-tech mabhizinesi Jiangsu Provincial Dhipatimendi reSainzi neTekinoroji
Jiangsu Dhipatimendi RezveMari
2016 Yakavanzika Technology Enterprise Jiangsu Yakavanzika Technology Enterprise Association
2016 HWEMAHARA MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE IAF, CNAS
2015 CERTIFICATE YOKUDZIDZA SGS
2014 KUSIMBISWA KWOKutevedzera- CE ENTE CERTIFICAZIONE MACCHINE LTD.
2020 Yakagadzikana inotsigira kubatanidza furemu yedhiziri jenareta China Intellectual Property Hofisi
2019 Dhiziri jenareta iri nyore-ku-sanganisa lubricating conveyor China Intellectual Property Hofisi
2018 Unganidza zvitsiga zvakagadzikana zvejeneri jenareta China Intellectual Property Hofisi
2017 Yakagadzika lubrication chigaro chedhiziri jenareta China Intellectual Property Hofisi
2016 Radiator inotenderera mudziyo wedhiziri jenareta China Intellectual Property Hofisi
ZVINOKOSHA KUBVA KWA ALIBABA
2013 Kucheka-Edge Awad yeE-commerce Global Trade Alibaba.com
Zvakanakira michina yekucheka laser ndeye kuchinjika, kunyatsoita, kudzokorora, kumhanya, kudhura-kushanda, hukuru hwemhando uye yekucheka isina kuonana.
Excalibur yakadyara maseti maviri emachina ekucheka laser kuti ave nechokwadi cheExpalibur zvigadzirwa 'kunyatso uye kugadzirwa. Iine nerubatsiro rwemagetsi ekucheka michina, Excalibur inogona zvakare kuzadzisa vatengi veOEM zvinodiwa zvekuwedzera marogo mune zvigadzirwa zvedu.
Shanduko Kubva "Yakagadzirwa Na Excalibur" Kuenda "Yakagadzirwa Nehungwaru
Excalibur yakoka maAne Automatic Differential Chain Assembly Lines, ayo anokwanisa kugadzira 1250 seti enjini tambo imwe neimwe zuva nezuva. Dzimwe nzvimbo dzakakosha dzinozoitwawo nemarobhoti, anogona kudzikamisa zvikanganiso zvinokonzerwa nevashandi. Uye kuburikidza neE ERP system, isu tinokwanisa kubata uye kuongorora musangano, kugadzirwa, vashandi, mhando, zvinhu uye nharaunda kutyaira Excalibur kugadzirwa, kugona kushanda kumberi.
Robhoti Welding Machine
Welotic irobhoti inokwanisa kuwana mhando yepamusoro nekuona chaiyo yekumhanyisa kumhanyisa, kona uye chinhambwe nekururama kwe (+ 0.04mm). Kuve nechokwadi chekuti yega yega yekutenderera yakabatana inogara ichiburitswa kune yemhando yepamusoro inoderedza kudiwa kwekudhura rework.
Nerubatsiro rweRobot Welding Machines, Excalibur ine kuwedzera kukuru mukugadzirwa, nekudaro, inosimbisa iyo nguva yekuendesa. Kwete chete iyo Excalibur inogona kuvimbisa iyo yekuendesa nguva, asi zvakare mhando yezvigadzirwa inovimbiswa.
UNHU KUTONGA UYE garandi
Excalibur yakagara ichirwisa se sirogani "Kutendeseka Kutanga, Hunhu hwekutanga" kune wese mutengi
Raw Zvishandiso Bvunzo
Zvishandiso, senge kuomarara testers, micrometer, callipers, uye chiridzwa chekusvetuka kuyedza kutenderera uye nepamusoro pechiso.
Excalibur inoda kuti ese mativi eparutivi anofanirwa kuongororwa asati apinda mudura. Tine vaongorori vezvose zvipenga zvikamu, uye vaongorori vezvakakosha zvipenga zvikamu.
Gungano Rehunhu Bvunzo
Excalibur inoda kuvhurwa bvunzo kune chimwe chigadzirwa, kutarisa kana paine dambudziko neungano. Isu tinotarisa kumhanya, tembiricha, uye ruzha futi. Kana zvese zvanaka, isu tinotumira kune kurongedza.
Excalibur mainjiniya ndivo vari kutarisira gungano mhando . Ivo vanozochengeta zvinyorwa zveichi chiitiko uye mhedzisiro.
Sefekitori, isu tichagara tichitsigira yako nematekinoroji ezvose zvigadzirwa zvedu.
Kana chero garandi kesi ikaitika, isu tinodzokera kwauri nemhinduro dzedu mukati maawa makumi maviri nemana.
Kune iro dambudziko hombe, kunyangwe mukana wacho uri mudiki kwazvo, isu tinotumira mahunyanzvi edu kunze kwenyika kuti vabatsire kugadzirisa dambudziko.
Ese mativi ekupararira, mukati medu garandi nguva, ndeye mahara.
Kana ikapfuura iyo garandi nguva, isu tinogona zvakare kupa iwo ekuparadzanisa mativi kune ese edu zvigadzirwa.
Nekuteerera iwe uye kugara uchiwanika pamatanho ese muzvirongwa zvako, zvikwata zvedu zvekutengesa uye zvekubatsira technical zvinokuraira uye nekuwedzera kukosha chaiko.
Chuanghui Road, Lincheng Technology Maindasitiri Nzvimbo, Xinghua Ctiy, Jiangsu Province, PRChina
© Copyright - 2010-2021: All Rights Reserved. Zvinowanikwa Zvigadzirwa- Hot Hot - Sitemap.xml